Zimbabwe news, photos and video - wsbtradio.com
Topics > IntlTopics > Zimbabwe
A collection of news and information related to Zimbabwe published by this site and its partners.
Africa, Politics, Parliament, Robert Mugabe, National Government
Jacob Zuma, Laws, Robert Mugabe, Justice and Rights, Government
Cricket-Bangladesh beat Zimbabwe by 34 runs in second T20 match
ReutersMay 12 (Reuters) - Bangladesh beat Zimbabwe by 34 runs in the second Twenty20 international in Bulawayo on Sunday to level the series at 1-1.
Bangladesh 168-7 (Tamim Iqbal 43, Shakib Al Hasan 40; Prosper Utseya 2-15)
Zimbabwe 134-9 (Shakib Al...
Cricket-Zimbabwe beat Bangladesh by six runs in first T20
ReutersMay 11 (Reuters) - Zimbabwe beat Bangladesh by six runs in the first Twenty20 international in Bulawayo on Saturday.
Zimbabwe 168-5 (H. Masakadza 59, B. Taylor 40; Shakib Al Hasan 2-20)
Bangladesh 162-8 (Shakib Al Hasan 65, Shamsur Rahman 53,...
Cricket-Bangladesh beat Zimbabwe by 121 runs
ReutersMay 3 (Reuters) - Bangladesh beat Zimbabwe by 121 runs in the first one-day international in Bulawayo on Friday.
Scores: Bangladesh 269 for eight (Nasir Hossain 68; Shingi Masakadza 4-51) v Zimbabwe 148 (Hamilton Masakadza 38; Ziaur Rahman 5-30)...
Zambia, Religion and Belief
Cricket-Bangladesh win second test to draw Zimbabwe series
ReutersHARARE, April 29 (Reuters) - Bangladesh beat Zimbabwe by 143 runs to win the second and final test at the Harare Sports Club on Monday.
Zimbabwe: 282 (E Chigumbura 86; Robiul Islam 5-85, Sohag Gazi 4-59) & 257 (H Masakadza 111 not out; Ziaur...
ReutersHARARE, April 29 (Reuters) - Scoreboard at the end of the second and final test between Zimbabwe and Bangladesh at the Harare Sports Club on Monday:
R Chakabva b Shakib Al Hasan 22...
Methamphetamine (drug), Bangladesh
Cricket-Bangladesh 163-5 (& 391) v Zimbabwe (282) - second test
ReutersApril 27 (Reuters) - Bangladesh were 163 for five
wickets at the close on the third day of the second and final
test against Zimbabwe at Harare Sports Club on Saturday.
Scores: Bangladesh 163-5 (Shakib Al Hasan 59, Mushfiqur Rahim 50; S Masakadza 3-33)...
Cricket-Zimbabwe 158-4 v Bangladesh (391) - second test
ReutersApril 26 (Reuters) - HARARE - Zimbabwe were 158 for four wickets at the close on the second day of the second and final test against Bangladesh at Harare Sports Club on Friday.
Scores: Zimbabwe 158-4 (E Chigumbura 45 not out; Robiul Islam 2-34)...
ReutersLONDON (Reuters) - Fears that Zimbabwe's government will strip foreign mines of half their assets without compensation are unfounded, according to Kalaa Mpinga, chief executive of Mwana , which has gold and nickel operations there.
"There is a lot of...
Political Fundraising, Politics, Robert Mugabe, Metal and Mineral, National Government
Cricket-Bangladesh 300-6 v Zimbabwe - second test close
ReutersHARARE, April 25 (Reuters) - Bangladesh were 300 for six wickets at the close on the first day of the second and final test against Zimbabwe at Harare Sports Club on Thursday.
. Scores: Bangladesh 300-6 (Shakib Al Hasan 81, Mushfiqur Rahim 60) v Zimbabwe...